Translations < Burmese < WordPress.com < GlotPress Translate WordPress.com
Translation of WordPress.com: Burmese	Glossary
3,522 / 31,333 Strings (11 %)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (31,333) • Untranslated (27,711) • Waiting (85) • Fuzzy (22) • Warnings (19) • Current Filter (1)
XFN stands for <a href="http://gmpg.org/xfn/">XHTML Friends Network</a>, which is optional. WordPress allows the generation of XFN attributes to show how you are related to the authors/owners of the site to which you are linking.	 XFN သည် <a href="http://gmpg.org/xfn/" target="_blank">XHTML Friends Network</a> အတွက် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ သင်ချိတ်ဆက်ထားသော ဆိုဒ် ရေးသူ/ပိုင်ရှင် နှင့် သင် ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေသလဲကို ဖော်ပြရန် XFN အထူးပြုများ၏ မျိုးဆက်များကို WordPress မှ ခွင့်ပြုသည်။	 Details
XFN သည် <a href="http://gmpg.org/xfn/" target="_blank">XHTML Friends Network</a> အတွက် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ သင်ချိတ်ဆက်ထားသော ဆိုဒ် ရေးသူ/ပိုင်ရှင် နှင့် သင် ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေသလဲကို ဖော်ပြရန် XFN အထူးပြုများ၏ မျိုးဆက်များကို WordPress မှ ခွင့်ပြုသည်။
2017-11-14 08:39:01 GMT